सकसमा समायोजन : ४ हजार २४२ दरबन्दी रिक्त, अझै ४४४ फाजिलमा – Health Post Nepal
सकसमा समायोजन : ४ हजार २४२ दरबन्दी रिक्त, अझै ४४४ फाजिलमा
२०७८ भदौ २४ गते १६:३२
मुलुकले नयाँ शासन व्यवस्थाका रुपमा संघीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेदेखि नै चर्चा सुरु भएको स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजनको विषय अझै पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
समायोजनले पूर्णता नपाउँदा एकातिर स्वास्थ्यका रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति तथा स्तरवृद्धिका काम हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी खटिन नपुग्दा सेवाप्रवाहमा समस्या भइरहेको छ।
लामो सकसपूर्ण कसरतपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारीको समायोजन तथा पदस्थापनमा आइपुग्दा भने थप अन्योलमा फसेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार अझै पनि समायोजनको टुगों लाग्न सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको ३१ हजार ४९२ दरबन्दी रहेकोमा २६ हजार ८०६ जनाको समायोजन भएको छ।
महालेखा प्रतिवेदनको अनुसार ४४४ फाजिलमा र ४ हजार २४२ दरबन्दी अझै रिक्त अवस्थामा छन्।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय भने पद मिलानमा परेको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने काम बाँकी रहेको भन्दै रिक्त दरबन्दीमा समेत भर्ना माग नगरी बसेको छ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया थालिएको तीन बर्ष पुग्न लागिसकेको छ। तर, समायोजन अझै टुंगो पुग्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाई छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले समायोजनले पूर्णता नपाउँदा अझै रिक्त दरबन्दीका टुगों लाग्न सकेको छैन।
मन्त्रालयको प्रशासनको महाशाखा प्रमुख शैलेजा रेग्मीले रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्नका लागि लोकसेवा लाई माग आकृति फारम पठाउन होम वर्क भइरहेको जानकारी दिइन्।
‘असोजको १८ मा लोकसेवाले विज्ञापन निकाल्छ। माग आकृृति फारम भदौं १५ सम्म पठाउनुपर्ने थियो,’ रेक्मीले भनिन्, ‘ केही होम वर्क गर्दा ढिला भएको हो। अब केही दिनमा लिष्ट जान्छ।’
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफा २५ ख मा कुनै पनि कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई एक महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
‘समायोजन पश्चात पछि कतिपय कार्यालयमा बढी र कतिपय कार्यालय घटी कर्मचारी रहेको हुँदा समायोजन व्यवस्था प्रभावकारी बनाई सेवा प्रवाह चुस्त दुरूस्त बनाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
2 thoughts on “सकसमा समायोजन : ४ हजार २४२ दरबन्दी रिक्त, अझै ४४४ फाजिलमा”
कमल रेग्मी says:
कति समय सम्म फाजिलमा बस्नुपर्ने हो ? मन्त्रालय ले समायोजन मिलानका लागि फागुनमा सुचना निकालेकोमा सहमति सहित निवेदन दिएर पनि हामी फाजिल वालालाई दरबन्दीमा समायोजन गरेको छैन । निराश बनेर काम गर्नुपरिरहेको छ, समायोजन ग्रेड पनि पाइएको छैन । अदालतमा मुद्दा दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
ssangita pakhrin says:
यो नितान्त यथार्थ बिषय हो… म आफै कार्यरत कार्य लय मा पनि दर्बन्दी को म मात्रै छु। करार मा स्थानिय तहबाट मनोमानी ढङगले कर्मचारी त छन तर जागिर खाने छोड्ने प्रकृया दोहोरिरहदा स्वास्थय जस्तो सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको छ! रिक्त दरबन्दी रहेको स्थानमा फाजिल र काजमा भएका कर्मचारी लाई मन्त्रालय बाट सिधै सिफरिस गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्यो